Cusboonaysiinta cusub ee Sawirada Google oo leh shaqooyin iyo horumarin cusub | Wararka IPhone
Cusbooneysiinta Sawirada cusub ee Google oo leh astaamo cusub iyo horumarin
Waqtigan xaadirka ah suuqa, adeegga kaliya ee na siiya, gebi ahaanba bilaash, meel aan xadidneyn oo daruurteenna ah oo lagu kaydiyo nooc kasta oo sawir ama muuqaal ah waa Google Sawirro. In kasta oo ay leedahay daabacaad yar oo aan saameyn ku yeelan isticmaaleyaal badan mahadnaqa isbeddellada cusub ee soo saarayaasha qalabka mobilada, ugu yaraan xagga sawir qaadista ayaan ku hadalnaa. Sawirrada Google waxay noo ogolaaneysaa inaan keydinno sawir kasta oo qaraarkiisu ka hooseeyo 16 Mpx iyada oo aan xadka lahayn nooc kasta. Haddii aan ka hadalno fiidiyow, waxaan sidoo kale keydin karnaa nooc kasta oo fiidiyoow ah laakiin xallin ka yar 4k.
Dhowr bilood ka hor, Google waxay cusbooneysiisay codsi Sawirro ah iyagoo toosh ku darey mashiinka raadinta, si aan sidoo kale u raadin karno sawirro ku kaydsan daruuraha mashiinka raadinta ee IOS. Shirkadda Mountain View ee fadhigeedu yahay ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo kuu oggolaaneysa inaad sawirro si toos ah uga soo qaadato daruurta, adigoon kala soo degsan qalabkaaga ka dibna aad mar kale geliso si aad u kaydiso isbeddelada. Tani waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan ama fikrad xun, iyadoo kuxiran baahiyaha adeegsadayaasha.
Laakiin intaa waxaa sii dheer, Google waxay sidoo kale hagaajisay hawlgalka barnaamijka marka la eego isticmaalka batteriga, isticmaalka aadka u daran markii sawirada la bilaabay in si otomaatig ah loo soo raro. Isticmaalka xogta barnaamijkan sidoo kale waa qarow, qarow in sida Google ay sifiican u hagaagtay gaar ahaan markaan baarayno maktabadda oo dhan oo daruurta ku keydsan.
Marka loo eego xogta adeegsiga ee ugu dambeysay ee ay bixisay Google, Adeegga Sawirada Google wuxuu kaydinayaa ilaa 13.7 petabytes. Dhammaan macluumaadkaan, qiyaastii 24.000 milyan ayaa u dhiganta sawirro iska qaad ah. Codsigan waxaa loo heli karaa soo dejin bilaash ah waana la jaan qaadi karaa nooca iOS 8.1. Shuruudda keliya ee adeegsigaas loo adeegsanayaa waa in la helo xisaab Gmail ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Cusbooneysiinta Sawirada cusub ee Google oo leh astaamo cusub iyo horumarin
Miyaan ahay kan kaliya ee qiimaha haysashada sawirrada google ay umuuqato mid aad qaali ugu ah adeegga ay bixiyaan "bilaash"?
Ma haysto oo waxaan rajaynayaa inaanan waligay helin.
Tan waxaan weydiisanayaa maxaa yeelay wax walba oo aan ku arko shabaqa waxay ila tahay aniga inaan ahay qofka kaliya ee aanan dooneyn inaan ku helo qiimahaas.
Ku jawaab Arroyao
Baadh & Turjum ayaa laga heli karaa soo degsasho bilaash ah